Al-Shabaab hoobiye tuurayay oo lagu qabtey Muqdisho
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay nin ay sheegeen inuu katirsan yahay Kooxda Al-Shabaab, kaasoo sawiradiisa warbaahinta loo soo bandhigay.
Maxamed Xuseen Cali ayaa magaciisa lagu sheegay ninkan, oo booliska ay qabteen isagoo hoobiye ku tuurayay degmada Deyniile, oo ku taalla waqooyiga Caasimadda, taasoo kamid ah goobaha ugu amniga xun, oo Al-Shabaab ka buuxdo.
Al-Shabaab ayaan ka hadlin arintan, laakiin waxaa xusid mudan in mudooyinkii dambe ay soo kordheen weerarada hoobiyeyaasha ee lagu bartilmaameedsado goobo dowladeed oo ay kamid tahay Villa Soomaaliya.
Hay'adaha amniga Dowladda Soomaaliya ayaa ku fashilmay inay kahor tagaan weerarada hoobiye isla gudaha magaaladda Muqdisho laga soo tuuro, kuwaasoo lagu soo beego xiliyadda xaalad siyaasadeed dalka ka jirto.
Sidoo kale, waxaa madaafiicda lagu weeraraa Xalane, oo ah xarun ay degan yihiin UN-ka, Safaaradaha reer galbeedka, hay'ado kale oo caalami ah iyo Taliska AMISOM, waana meel kamid ah goobaha sida aadka ah amnigooda loo ilaaliyo.
Madaafiic lagu garaacay Saldhiga Turkiga ee Muqdisho
Soomaliya 12.05.2018. 11:05
Shacabka Muqdisho ayaa hurdada kasoo toosiyay dhawaqa madaafiicda lagu garaacay...
Qaraxyo iyo weerar hoobiye oo ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 16.05.2018. 22:30
Gabar Wariye ah oo lagu dhaawacay Muqdisho
Soomaliya 28.06.2018. 21:46
Toogasho ka dhacay Muqdisho iyo Fahfaahino laga helayo
Soomaliya 26.06.2018. 22:50
Trump oo ka hadlay askarigii Mareykanka ee lagu dilay Soomaaliya
Soomaliya 09.06.2018. 11:13
Mas'uul lagu dilay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 21.05.2018. 10:33
Soomaliya 28.03.2018. 22:56
Qarax Gaari oo goordhow ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 25.03.2018. 16:20